ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: Fan Curve (ACMV အကြောင်း)
Fan Curve (ACMV အကြောင်း)
Mechanical Ventilation > Fans > Fan Curve
Fan ဆိုတာ လေကို တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ရောက်သွားအောင် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ device တစ်ခုပါ။ A fan isadevice used to produceaflow of air.
ACMV မှာ အသုံးများဆုံး Fan နှစ်မျိုးကတော့ Centrifugal Fan နှင့် AxialFan တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Air flow က impeller ကို radial direction အတိုင်း ဖြတ်သွားရင် Centrifugal Fan လို သတ်မှတ်သည်။
Centrifugal fans အမျိုးအစားတွေကိုတော့ Wheel ရဲ့ blade ပုံကို အခြေခံပြီး forward – curved, backward–curved and
radial (straight) ရယ်လို့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြသည်။
Centrifugal fans တွေကိုတော့ quiet, efficient operation at comparatively high pressures တွေလိုအပ် Application
မျိုးတွေမှာအသုံးပြုပါတယ်။ Air Handling Unit နှင့် Fan Coil Unit အားလုံးနီးပါး Centrifugal fans တွေကိုအသုံးပြုကြသည်။
Air flow က impeller ကိုaxial direction အတိုင်း ဖြတ်သွားရင်Axial Fan လို သတ်မှတ်သည်။
Axial fans အမျိုးအစားတွေကိုတော့ Wheel ရဲ့ blade ပုံကို အခြေခံပြီး propeller (disc), tubeaxial and vaneaxial.ရယ်လို့ ခွဲခြားသတ်မှတ်ကြသည်။
large air volume applications တွေအတွက် Axial flow fans တွေကို အသုံးပြုကြသည်။ သို့သော် ဆူညံသံမြင့်မားသည်။ (တနည်း higher noise levels)
ထိုကြောင့် confort applications ထက် industrial air conditioning and ventilation များအတွက် Axial fans ကို အသုံးများသည်။
fans များကို overloading နှင့် non overloading ဟု၍ ခွဲခြားနိုင်သည်။
The backward – curved blade centrifugal fan သည်anonoverloading (type)အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
The forward – curved and radial blade centrifugal fans ကို overloading (type)အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
Axial flow fans များ သည် nonoverloading သို့ overloading အမျိုးအစားဖြစ်သည်။
Fan သို့ Air Moving Devices များနှင့် ပက်သက်လာလျှင် ကိုးကားရမည့် standard မှာ The AMCA standard Test Code for Air Moving Device
The AMCA standard Test Code for Air Moving Devices, Bulletin 210, prescribes methods of testing fans,
while AMCA rating standards prescribe methods of rating.
အောက်ပါ ဇယားသည် The AMCA standard မှ Centrifugal fans အတွက် Pressure အရ သတ်မှတ်သော Fan ၏ အဆင့်အတန်း (Fan Class )များဖြစ်သည်။
Fan ၏ Total pressure33/4 လက်မ(Water Colum) အောက်ကို Class I ဟုသတ်မှတ်သည်။
Fan ၏ Total pressure33/4 လက်မ(Water Colum) မှ
6 3/4 လက်မ(Water Colum) အတွင်း ကို Class II ဟုသတ်မှတ်သည်။
Total pressure များလာလေလေ Fan Class of Construction မြင့်လာ လေလေ ဖြစ်သည်။
Fan တစ်လုံး၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း (performance) ကို ဇယားပုံစံဖြင့် (tabular form) ဖော်ပြလေ့ရှိသည်။ (Table 6).
Centrifugal Fan ၏ Contruction မှာ Class I Rating ဖြစ်သည်။
Centrifugal Fan အမျိုးအစားမှာ Backward-Curved ဖြစ်သည်။
Wheel Diameter မှာ ၄၄ လက်မခွဲဖြစ်သည်။
Tip Speed ကို ရရန် 11.65 ဖြင့် wheel လည် သည့် အပတ်ရေဖြင့် မြှောက်ယူနိုင်သည်။
တတိယ Row နှင့် 1/2" SP colum မှ 16613 CFM နှင့် Static Pressure 1/2" ရရှိရန် Fan ကို 264 rpm ဖြင့် မောင်းရမည်ဖြစ်ပြီး 1.64 BHP သုံးစွဲလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
သို့သော်agraphic analysis performance curves သည့် အသုံးပြုရာတွင် ပို၍လွယ်ကူသက်သာသည်။
တစ်ခါတစ်ရံ curves မရရှိနိုင်သည့်အခါတွင် constant speeds တစ်ခုတွင် pressure and horsepower ကို အသုံးပြု ၍မိမိဖာသာ performance curves ကို ပြုလုပ်ယူနိုင်သည်။
If no curves are available, tabular values of pressure and horsepower may be plotted at constant speeds over the given range of
capacities, The resulting curves may then be used as described under Fan Performance inaSystem.
အထက်ပါပုံများသည်abackward inclined centrifugal fan တစ်လုံး၏ Wheel နှင့် Blade ပုံများဖြစ်ကြသည်။
့ပုံသည် backward inclined centrifugal fan တစ်လုံး၏ တွေ့ ရလေ့ရှိသော Fan Curve ဖြစ်သည်။ Fan Curve ဆိုသည်မှာ fan တစ်လုံး ကို မောင်းလျှင် ရရှိနိုင်မည့် Air Flow (CFM) နှင့် Static Pressure (inch wg) ကို Graph ပေါ်တွင် ဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ ထို Fan Curve ကြည့်ပြီး မိမိ မောင်းလို့သည် Operating Point သို့ Operating Range သို့ Operating Region ကို ရရှိနိုင်သည်။
မိမိမောင်းလိုသည့် Air Flow (CFM)ကို သိထားလျှင် fan က Perform လုပ်မည့် Static Pressure (inch wg) ကို ရနိုင်သည်။ တနည်း မိမိမောင်းလိုသည့် Static Pressure (inch wg) ကို သိထားလျှင် fan က Perform လုပ်မည့်Air Flow (CFM) ကို ရနိုင်သည်။
fan ကို ထုပ်လုပ်ရောင်းချသူများမှ Fan Curve ကို ရရှိနိုင်သည်။ Fan Curve ကို အနည်းဆုံး Air Flow (CFM) နှင့် Static Pressure (inch wg) များမှ အများဆုံးထိဖော်ပြကြသော်လည်း Fan ကို Fan Curve ၏ နေရာတိုင်း၌မောင်းရန်မသင့်တော်ပါ။
ထို Fan Curve တလျှောက်တွင် Point A မှ C သည် အသုံးပြုရန်မသင့်သော နေရာဖြစ်သည်။ Fan Curve ၏ အလယ် သုံးပုံတစ်ပုံနေရာသည်သာ အသင့်တော်ဆုံးမောင်းရန်နေရာဖြစ်သည်။
A typical curve forabackward inclined centrifugal fan. .
ဤပုံသည် Fan Curve ကို ၂ ခုကို Graph တစ်ခုပေါ်တွင်တင်၍ဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။
Fan Curveတစ်ခုမှာ Air Flow (CFM) နှင့် Static Pressure (inch wg) ကို တည် ၍ဆွဲထားခြင်းဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခုမှာ Air Flow (CFM) နှင့် သုံးစွဲသည့် Power (BHP) ကို တည် ၍ဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်။ Graph တစ်ခုပေါ်တွင် Fan Curve လိုင်းပေါင်းများစွာဆွဲနိုင်သည်။
Fan Curve အသုံးပြုသည့် ဥပမာ
ပုံတွင်ပြထားသည့် backward-inclined centrifugal Fan သည် Fan Curveအရ 6,500 CFM (Horizational Axis) ဖြင့် မောင်းသည့် အခိုက်၌ Static Pressure 4.0 inch wg (ဘယ်ဘက် Vertical Axis မှဖတ်သည်) ကို ရရှိနိုင်ပြီး 6.9 BHP (ညာဘက် Vertical Axis မှဖတ်သည်) ကို သုံးစွဲသည်။
A typical static pressure/hp curve, backward-inclined centrifugal
Fan များသည် ယေဘူယအားဖြင့် Air Flow (CFM) များလာလေလေ Static Pressure (inch wg) နည်းလာလေလေဖြစ်သည်။ ထိုကြောင့် Fan Curve သည်
LAWS OF FAN PERFORMANCE
Fan laws are used to predict fan performance under changing operating condition or fan size.
They are applicable to all types of fans. The fan laws are stated in Table 5. The symbols
used in the formulas represent the following quantities:
Q – Volume flow rate thru the fan.
N – Rotational speed of the impeller.
P – Pressure developed by the fan, either static or total.
Hp – Horsepower input to the fan.
D – Fan wheel diameter. The fan size number may be used if it is proportional to the wheel diameter.
W – Air density, varying directly as the barometric pressure and inversely as the absolute temperature.
In addition to the restrictions noted in Table 5, application of these laws is limited to cases where fans are geometrically similar
အထက်ပါ Fan Law အရ
Q – Volume flow rate သည် N – Rotational speed နှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျသည်။ N – Rotational speedများလျှင် Q – Volume flow rateလည်းများသည်။
P – Pressure (static or total) သည် N – Rotational speed ၏ နှစ်ထပ် (Square) နှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျသည်။
N – Rotational speed များလျှင်P – Pressure (static or total) လည်းများသည်။
Hp – Horsepower input to the fan သည် N – Rotational speed ၏ သုံးထပ် (Cube)နှင့် တိုက်ရိုက်အချိုးကျသည်။
Example 1 – use of Laws 1 thru 3
Air quantity - 33,120 cfm
Static pressure - 1.5 in wg
Fan speed - 382 rpm
Brake horsepower - 10.5
Capacity, static pressure and horsepower if the speed is
incased to 440 rpm.
Capacity = 33,120 x (440 / 382 ) = 38,150 cfm
Static pressure = 1.5 x ( 440 / 382 )2= 2.0 in. wg
Horsepower = 10.5 x ( 440 / 382 ) 3= 16.1 bhp
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 7:19 AM